Kudzidza kunowanikwa kuti kuzviuraya kwevasikana kunowedzera, kunyanya pakati pe10 kusvika kune 14 makore - TELES RELAY
HOME » kambani Kudzidza kunoratidza kuti kuzviuraya kwevasikana kuri kuwedzera, kunyanya pakati pe10 pa14
Vatsvakurudzi ve Nationwide Children's Hospital muColumbus, Ohio, vakaongorora kuwedzera kwekuzviuraya kwevana vane makore gumi nemana nevechiri kuyaruka vane 10 pakati pe19 ne1975 vachishandisa database yakazara epidemiological research, inotungamirirwa neU.S. Centers for Disease Control. Kudzivirira.
Panguva iyi, pane huwandu hweHNUMX 85 kuzviuraya kune vana nevechiri kuyaruka, kusanganisira 000% muvakomana ne80% muvasikana. Kuzviuraya kwekuzviuraya kwakapinda mu 20 uye kwaiva pasi ku1993, pavakatanga kukwira zvakare, maererano nezvakawanikwa zvakabudiswa Chishanu. JAMA .
Kunyange zvazvo vakomana vaiva 3,8 nguva yakawandisa kupfuura vasikana kuzvizviuraya panguva yekudzidza kwe40, kupera kuri kuderera nokukurumidza. Kubva ku2007, kuzviuraya kwevasikana kubva ku10 kusvika ku14 kwemakore kwakawedzera ne 12,7% pagore, zvichienzaniswa ne7,1% yevakomana vezera rimwe chete. Chiitiko chakafanana chakaonekwa muvechidiki vechi15 mumakore e19, nekuwedzera kuzviuraya kunowedzera ne7,9% yevasikana ne3,5% yevakomana.
Vakomana vane makore 15 kusvika ku19 kwemakore vakaramba vachizviuraya vachishandisa mabhuruni pamitengo yakanaka kupfuura yevasikana, asi kumira kwekumiswa uye kusangana pakati pevasikana kwakanga kwakafanana neyavakomana.
Kuzviuraya ndicho chechipiri chinokonzera rufu pakati pevana nevechiri kuyaruka kubva ku10 kusvika ku19 kwemakore muUnited States mushure mezviitiko nekukuvadza kusingatarisirwi, maererano neCDC. Nhamba dzekuzviuraya dzakagara dzichikwirira kune vakomana kupfuura vasikana vemazera ose.
Vakadzi vanoenda hwakaipa zvikuru rinoreva vari "tsime hanya zvikuru," akadaro mutobvu munyori Donna Ruch, mutsvakurudzi nesayenzi panguva Nationwide Vana Hospital, achiwedzera kuti vasikana kuramba kuzviuraya pa dzakakwirira prices uye kuchinja kune dzimwe nzira dzinouraya kunogona kuva nemigumisiro yakaipisisa kuzviuraya kuzviuraya muboka iri.
Kudzidza haana zvakagadzirirwa kuona zvikonzero izvi zvinovhiringidza kuitika, akati Dr. Joan Luby, mumwe chiremba wepfungwa vana nevechidiki pane zvokurapa mano University of Washington, uye Sara Kertz, chiremba wepfungwa panguva Southern Illinois University, rondedzero yakabudiswa pamwe chete nekudzidza mukati JAMA .
Asi kupa nguva pfupi umo kuzviuraya kwakawedzera zvinoshamisa pakati pevasikana, Luby naKertz vanofunga nezvemagariro evanhu vanogona kupa.
Vasikana vangave vakanyanya kunetseka pamusana pemigumisiro yekushamwaridzana
"Kuenzaniswa nevakomana, vasikana vanoshandisa huwandu hwemagariro evanhu uye vanowanzosangana neukombiyuta," akanyora kudaro Luby naKertz. 19659004] Vasikana vakaora mwoyo vanowedzerawo mazano asina kunaka kubva kune shamwari kumagariro evanhu panzvimbo yevasikana,
Izvi zvinowanikwa pamwe chete zvinoratidza kuti migumisiro yakaipa yehuwandu hwemagariro evanhu inogona kusimba pane vasikana uye inogona kujekesa kuti nei vasikana vari pangozi yekufunga kuzviuraya nemafambiro.
Asi nhepfenyuro yezvemagariro ingangodaro ichingova chikamu chimwe chete chepikicha.
Basa remitemo yevanhu uye zvinotarisirwa
"Tinoziva kuti mamwe mitemo yezvemagariro evanhu uye zvinotarisirwa zvevakadzi zvinogona kuwirirana nematunhu akakwirira ehutano hwepfungwa uye kuzviuraya," akadaro Dr. Barbara Robles. -Ramamurthy, Mwana uye Mwana Ari Kuyaruka Psychiatrist muUnited Health San Antonio Long School yeMishonga, uyo asina kubatanidzwa mukudzidza. "Ipapo unowedzera chinokonzerwa nemasikironi-mahomoni - uye chimiro chezvakaberekwa."
Chimwe chikonzero chekuwedzera kuora mwoyo uye kuzviuraya kune vakomana nevanasikana vangava kudzvinyirira uye kuomesa vana, akadaro Dr. Gene Beresin, mutungamiri mukuru weClay Center yeEalthy Young Minds pa Massachusetts General Hospital uye purofesa wepfungwa dzepfungwa paHarvard Medical School, avo vasinawo kupinda muchidzidzo.
"Vana vanowanzoda kutsvaga kubudirira, kunyanya ivo vanonyanya kufunga nezvekurarama kupfuura makore apfuura," akadaro.
Kutorwa woga, hapana chimwe chezvinhu izvi chakaguma nekuwedzera kuzviuraya uye pakupedzisira kuzviuraya, kutorwa pamwechete, muenzaniso unotanga kuonekwa, akadaro Beresin.
Zivai zviratidzo zvinonyevera kuvana nevechiri kuyaruka
Zvirwere zvepfungwa - kunyanya panyaya yekuora mwoyo uye kuzvidya mwoyo-zvingave zvinyararire kana kuratidzwa nenzira yakasiyana zvingatarisirwa, anodaro Robles-Ramamurthy. Mukuwedzera kusuruvara, kuora mwoyo kwevana nevechiri kuyaruka kunogona kukonzera kutsamwa nekutsamwa.
"Zvakajairika kuti mwana wako atange kuva nemamwe mafungiro uye zvinetso," akadaro nezvekuyaruka. "Asi kana iwe ukatanga kuona kuchinja kwakanyanya, kudzidzira kwavo kuchikoro kunopera, havashandisi nguva yakawandisa nemhuri dzavo kana kuti havazviparadzanisi ivo, ivo vakuru mabhogi."
Kana maitiro aya aripo, Robles-Ramamurthy anokurudzira kubvunza vacheche kana vanonzwa vaora mwoyo kana vakafunga kuzvikuvadza pachavo kana kupedza upenyu hwavo. Kunyatsobvunza mibvunzo iyi hakuiti kuwedzera njodzi yekuzviuraya, akawedzera.
Nzira yekuwana rubatsiro: MuUnited States, danai National Suicide Prevention Line pa 1-800-273-8255. I International Association for Kuzvidzivirira Kuzvidzivirira uye Shamwari Pasi Posewo inopa ruzivo rwekutsvaga kune dambudziko nzvimbo dziri munyika yose.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.cnn.com/2019/05/17/health/suicide-rates-young-girls-study/index.html
MuCameroon, varwi vakawanda vanoisa maoko avo